LibreOffice 6.3.3 inosvika ichigadzirisa zvikanganiso makumi masere nematatu mune zvakateedzana | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.3.3 inosvika ichigadzirisa zvikanganiso makumi masere nematatu mune zvakateedzana
Ingopfuura mwedzi mushure me previous version, Iyo Gwaro Foundation ine LibreOffice 6.3.3 yaburitswa nhasi. Ichi chiitiko chitsva chekugadzirisa chinoteedzana icho parizvino chakangogadzirirwa vashandisi vanoda kunakidzwa nemabasa azvino kwazvo, nekuti iyo vhezheni yakagadzirirwa zvigadzirwa zvekugadzira ichiri iyo LibreOffice 6.2.8 inowanikwa kubva pakati pemwedzi uno. Iyi vhezheni nyowani yeakakurumbira hofisi suite haina kusanganisira chero nyowani maficha, asi iri pano kugadzirisa bugs.
Pamwechete LibreOffice 6.3.3 yakagadzirisa zvikanganiso makumi masere nematatu izvo zvakawanikwa mune dzino zvakateedzana. Iyo rondedzero yemabhuregi akagadziriswa inogona kuwanikwa muzvinyorwa zvavakaburitsa pane yekutanga neyechipiri Regedza Vanokwikwidza veLibreOffice 6.3.3, inowanikwa pa Iyi link y uyu mumwe zvichiteerana. Iwe unogona kuwana iyo chinyorwa kwavanotaura nezve kuwanikwa kweiyo nyowani vhezheni kubva pano.
LibreOffice 6.3.3, hapana nhau dzinozivikanwa
Zvinotoshamisika kuverenga kodhi yekuburitsa pasina chero nhau inozivikanwa, ichizvimisikidza chete pakupa maviri ma link mune ese akagadziriswa mabegi akaunganidzwa. Chero zvazvingaitika uye sezvatakambotaura pane imwewo nguva, zvinongodiwa kuti isu tiri kusangana nekutadza kunetsa kuti tione kukosha kwazvinoitwa. Pasina kuenda kumberi, kusvikira imwe yazvino vhezheni, maapps akaita seMunyori akapa matambudziko kana uchipuruzira nepaniki yekubata pane mamwe masisitimu anoshanda
LibreOffice 6.3.3 yave kuwanikwa yeWindows, macOS uye Linux kubva kune yayo yepamutemo kurodha webhusaiti iyo iwe yaunogona kuwana kubva pano. Vashandisi veLinux vanogona kuikanda muDEB vhezheni yeDebian / Ubuntu based system, muRed Hat RPM kana mumabhanari. Kana ichizowanikwa mumahofisi epamutemo zvichatsamira pakuparadzirwa, nekuti vamwe vanosarudza kugara pane yakagadzika vhezheni. Iyo inotevera vhezheni ichave yatove LibreOffice 6.3.4 iyo ichaburitswa muna Zvita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 6.3.3 inosvika ichigadzirisa zvikanganiso makumi masere nematatu mune zvakateedzana
Shandisa Python paLinux. Nzira yakanaka yekudzidza chirongwa.
Python musiki anotsiva basa kubva kuDropbox